BQ waxay cusbooneysiin doontaa 10 taleefan oo loogu talagalay Android 9.0 Pie | Androidsis
Eder Ferreño | | Bq, Noocyada Android
Android 9.0 Pie ayaa si rasmi ah loo sameeyay maalmo ka hor, si lama filaan ah. Nooca cusub ee nidaamka qalliinka ayaa bilaabi doona inuu yimaado wax yar ka dib moodooyinka cusub, ka dib markii Google Pixels mar hore la cusbooneysiiyay. Hadda waxaa la joogaa xilliyada magacyada lagu dhawaaqayo noocyada ay cusbooneysiin karaan. Tani waa kiiska BQ, oo horey u shaaciyay taleefannada ay cusbooneysiin doonaan.
Nooca Isbaanishka ayaa adeegsanaya Android One qaar ka mid ah moodooyinkiisa. Sidaa darteed, waxaa la filayaa inay jiraan telefoonno awood u yeelan doona inay cusbooneysiiyaan Android 9.0 Pie sida ugu dhakhsaha badan. Shirkadduna waxay horey u shaacisay liiska taleefannada. Laakiin maaha taariikhaha.
Waqtigan xaadirka ah waxay ku dhawaaqayaan wadarta 10 taleefan yaa noqon doona kan ku xiga ee hela cusbooneysiinta. Su'aashu waxay weli tahay inay iyagu noqon doonaan kuwa ugu horreeya ama haddii ay dhab ahaan noqon doonaan kuwa keliya ee hela cusbooneysiintan. Waa inaan sugnaa warar dheeri ah oo ka yimaada BQ lafteeda.
Hada, waxaan kaaga tagi doonaa marka hore adiga liis buuxa oo taleefanno ah oo BQ horeyba rasmi ahaan shaaca uga qaaday:
Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro (Moodooyinka leh Android One)
Aquaris X iyo Aquaris X Pro
Aquaris U2 iyo Aquaris U2 Lite
Aquaris VS iyo Aquaris VS Plus
Aquaris V iyo Aquaris V
Tobankan moodel ayaa ah kuwa si rasmi ah u heli doona Android 9.0 Pie. Waxa aan hadda la aqoon waa taariikhda ay cusbooneysiintu iman doonto. Moodooyinka leh Android One ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee si rasmi ah loo cusbooneysiiyo. In kasta oo aan sugi doonno xog dheeri ah oo arrintan la xiriirta.
Malaha markii Android 9.0 Pie si rasmi ah loo sii daayay, BQ ka tag macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiintan. Sidaa darteed, waa inaan in yar sugno ilaa aan ka ogaanno faahfaahin dheeraad ah qaab la taaban karo. Waxaan ka dhagaysan doonnaa waxa shirkadda Isbaanishka leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » 10 telefoonada BQ ayaa cusbooneysiin doona Android 9.0 Pie
The Xiaomi Mi 8X ee shahaadada 3C, saddex nooc ayaa u muuqda